आफ्नै श्रीमानले श्रीमतिलाई कसरी लगाउन सक्छ यस्तो घि*नलाग्दो काम? (भिडियो) – दैनिक नेपाल न्युज
आफ्नै श्रीमानले श्रीमतिलाई कसरी लगाउन सक्छ यस्तो घि*नलाग्दो काम? (भिडियो)
हाम्रो समाजमा अहिले ह*त्या हिं*सा उग्र रुपमा बढीरहेको छ । कहिले बला*त्कारको होस् या का*टमा*रको होस् दैनिक जसो एउटा न एउटा देखेका वा सुनेका हुन्छौ । अझ ड*रलाग्दो कुरा के छ भने पछील्लो समय सुनेका कधिकांश घ*टना आफ्नै परिवार वा आफनतै बाट धेरै पीडित देखिन्छन् ।
यस्तैमा कलंकी बस्दै आएकी मन्जु परियारपनी आफ्नै श्रीमानको शिकार बन्न पुगेकी छिन् । दलित समुदायकी मन्जु ब्रम्हण समुदाएको केटासंग विवाह गरेर एक बच्चा समेत जन्माईसकेकी छिन् । तर श्रीमानले बच्चा जन्मेपछी छाडेर गएपछी उनी बिचल्लिमा परेकी हुन । उनको बाल्यावस्थामै बला*त्कार भएको र आफ्न्तैबाट उनी कैयौ पटक चेपुवामा परेको उनी बताउछिन् । हेरौ मन्जुको सुन्दै ड*रलाग्दो जीवन भोगाई भिडियो मार्फत :